Sizokufundisa ukuthi ungashajwa kanjani kabusha ibhalansi yeselula yelungu lomndeni noma umngane ose-Ecuador. Siyazi ukuthi ukuba kude nabathandekayo bakho kungaba nzima, kodwa ngenxa yomlingo wezokuxhumana ungazizwa usondelene nabo. Ukushaja kabusha umakhalekhukhwini e-Ecuador kulula kunalokho kubonakala.
Abantu abaningi basibuze ukuthi singawashaja kanjani kabusha amaselula aye e-Ecuador evela phesheya? Ungakwenza kanjani ukushajwa kwamazwe ngamazwe kusuka eSpain? Sibalungiselele lesi sifundo esincane.
Abasebenza ngocingo abahola imakethe e-Ecuador bangu-3:
Claro. Inkampani yezokuxhumana i-Conecel, edume ngegama lezentengiselwano i-Claro, yaqala ukusebenza ngobuchwepheshe be-GSM ngo-2003. Njengamanje, ihlinzeka ngezinsizakalo ze-GSM. Inethiwekhi ye-4G LTE njengokushaya kwevidiyo nokufinyelela ku-inthanethi ngesivinini esikhulu.
I-Movistar. Iyingxenye yenkampani i-Otecel, yaqala ukusebenza ngobuchwepheshe be-CDMA ngo-2002. Njengamanje inikeza izinsiza I-broadband ye-3.5G ngobuchwepheshe be-UMTS/HSDPA ebhendini engu-1900 MHz.
CNT. I-National Telecommunications Corporation, i-CNT, yinkampani enolwazi oluncane emakethe yezokuxhumana yeselula, noma kunjalo, inikeza isevisi engazange iyeke ukukhula. NjengoClaro, inenethiwekhi yayo futhi inikeza Ubuchwepheshe be-LTE.
Shaja kabusha umakhalekhukhwini uye e-Ecuador online
Kuwebhu singathola amakhasi ambalwa akhethekile ekushajweni kabusha kwamaselula, amanye awo anikezelwe kuphela ekushajweni kabusha kwamaselula e-Ecuador. Sethula ezinye zazo:
I-Llamaecuador.com. Le nkampani inikeza amadili nsuku zonke okudluliselwa kwamanye amazwe futhi isevisi yayo iphephile futhi ithembekile. Ungakwazi ukushaja kabusha umakhalekhukhwini wakho uye e-Ecuador usuka e-Claro, i-Movistar noma i-CNT ngokuzethemba okuphelele, ngoba ziqinisekisa u-100% wakho konke okwenziwayo. Ungakhokha ngekhadi lesikweletu, i-JCB noma PayPal.
Xoom.com. Kuyinkampani yokugcwalisa kanye nokudlulisa imali, ebonakala ngokuvikela nokuvikela imininingwane yakho yomuntu siqu. Izinkokhelo zinesiqinisekiso sokubuyiselwa imali, uma uzakwenu engayitholi ibhalansi noma inani elithunyelwe. Kule portal ungashaja kabusha iselula uye e-Ecuador usuka eClaro naseMovistar.
I-WorldRemit.com. Kuyindlela elula yokuthumela ukushajwa kabusha kwe-airtime kusuka kukhompyutha, i-smartphone noma ithebhulethi. Ngale nkampani, ungeza ukushajwa kabusha kwama-opharetha eselula e-Claro, Movistar kanye ne-CNT. Njengezinkampani zangaphambilini, ukukhokhiswa kabusha kwebhalansi kungaphansi kwezindleko zekhomishini.
Doctorsim.com. NgodokotelaSIM ungakwazi ukushaja omakhalekhukhwini kabusha uye e-Ecuador kuma-opharetha e-Claro, Movistar kanye ne-CNT, kalula. Ukushajwa kabusha kuzosebenza ngokushesha futhi uzokwaziswa nge-SMS uma uzakwenu esethumele imali esele. Uma ungumsebenzisi ojwayelekile wale nkampani, yenza kusebenze i-imeyili yakho ukuze uthole amaphromoshini ngezikhathi ezithile.
Konke ukushajwa kabusha kwe-inthanethi kwe-doctorSIM kusobala ngokuphelele futhi kuqinisekisiwe. Bakubonisa izindleko zesevisi ukuze wazi kahle ukuthi yimalini okufanele uyikhokhe futhi ugweme izinto ezingalindelekile ngomzuzu wokugcina.
Ungashajwa kanjani kabusha ibhalansi e-Ecuador?
Amakhasi okushajwa kabusha omakhalekhukhwini e-Ecuador online, edaluliwe ngaphambilini, ahlinzeka ngesevisi esheshayo, elula nephephile. Ngenxa yalokhu, banezivumelwano zokusebenzisana nabaqhubi uClaro, Movistar kanye ne-CNT.
Ikhasi ngalinye linefomu lalo lapho kufanele ubhale khona inombolo yeselula ukuze ushaje kabusha, khetha u-opharetha weselula e-Ecuador futhi ubonise inani lokushajwa kabusha. Ngokuyisisekelo, kuwo wonke amakhasi ashajwayo aku-inthanethi, inqubo iyafana.
Ezinye zalezi zinkampani ikuvumela ukuthi wenze izinkokhelo nge-PayPal. Ngalolu hlelo inqubo ilula futhi iphephile. Kufanele nje ubhalise i-akhawunti yakho ye-PayPal ekhasini elizolamula ukushajwa futhi ngaso sonke isikhathi uma ufuna ukuthumela ibhalansi, vele ubhale inombolo yeselula yelungu lomndeni wakho noma umngane bese uchofoza ukukhokha nge-PayPal. Kulula futhi kuyashesha!
Phezulu kuselula » Izinkampani » Shaja kabusha umakhalekhukhwini uye e-Ecuador